Antsirabe: Jiolahy nahatratrarana basy vita gasy, nahazo fahafahana vonjimaika
Nanaitra ny mpanara-baovao teto Antsirabe ny nanafahan’ny Fitsarana olona maromaro, voarohirohy tamin’ny fanafihina mitam-basy tany Belazao ny 18 novambra 2017 lasa teo.
Olona miisa 6 ireo nosamborin’ny Polisim-pirenena tamin’izany ka nanaovana fanadihadiana, ary nisy tamin’ireo no nahatratrarana basy vita gasy iray tao Belazao-Antsirabe II, izay niaiky fa azy izany, saingy ampanofainy ho an’ireo olona voatafiky ny jiolahy. Nomen’ny Fitsarana fahafahana vonjimaika ny 4, anisany ity milaza ho mpampanofa basy ity, ary ny 2 no notanana am-ponja.
Sesilany ny fanafihan-jiolahy tao amin’ny Distrikan’Antsirabe faharoa tao ho ao, isan’izany ny halatr’omby tao amin’ny Fokontany Andrangy ka nahasamborana lehilahy iray atao hoe : Lesolo. Notanana am-ponja vonjimaika ity farany. Ny 18 novambra indray dia mpanangona ronono tao Belazao no lasibatry ny jiolahy ka very vola 10 tapitrisa Ariary sy entana maromaro.
Ny 24 novambra dia nisy nahita tao Itavo-Belazao ny taratasin’ny fiaran’ilay voatafika ka nahatonga ity farany nametraka fitoriana tao amin’ny Polisy. Rehefa nandeha ny fikaroham-baovao teny amin’ny Polisy dia voatonona tao ny anaran’i Lesolo, izay any am-ponja ka navoaka indray izy hanaovana fanadihadiana. Nandritra izany no nilazany fa izany Donné izany sy ny ekipany no nanao ny fanafihana satria fony izy mbola tsy voasambotra dia notaomin’io lehilahy io izy hanafika saingy nandà tsy hanafika eo an-tananany.
Olona maromaro no notononin’i Lesolo tamin’ny mpitandro filaminana sy nambarany fa mitazona basy. Nosamborina ireo olona voalaza ireo ka tamin’izany no nahitana ilay basy vita gasy tao amin’ny lehilahy iray atao hoe : Lezafy.
Nisy zazalahy iray nosamborina ihany koa ka nahatratrarana finday very ihany koa ary nahitana ny sarin’ireo voatafika tao anatiny, izay voamarina fa an’ireo olona voatafika ilay izy. Nandritra ny fanadihadiana moa dia re fa nisy ny fanelanelanana nataona olom-boafidy momba ireo olona voasambotra ireo.
Ny talata 5 desambra 2017, no niakatra ny Fampanoavana ity raharaha ity, ary nahazo fahafahana vonjimaika ny 4 tamin'ireo olona miisa 7 niaraka amin'ilay efa tany am-ponja ary isan’izany ilay tena nahatrarana basy sy niaiky fa mampanofa izany.
Raha nanotaniana ny mpitandro filaminana dia nanamarina ny fisian’ny fahafahana vonjimaika saingy nanambara kosa fa efa tsy eo amin’ny andraikiny intsony ny raharaha fa efa an’ny Fitsarana izany ka tsy misy hidiran’izy ireo.
Mampiaka-peo ireo mponina ao Belazao momba ity raharaha ity satria eo ny tahotra valifaty, indrindra fa ny fianakavian’ireo voatafika.